सहकारीको सिद्धान्तः सदस्य डुबोस्, खाल्डोमा जाओस् भन्ने नै हो त ? | Nepal's First Co-operative News Portal.
सहकारी बैंकबाट अध्यक्ष, सञ्चालकले कति बुझ्छन् तलब-भत्ता ?
सहकारीले प्राप्त गरेको उपलब्धी जोगाउन सम्पूर्ण सहकारीकर्मी एकजुट हुनुस् : मन्त्री अर्याल
बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट २५ अर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको छ : अध्यक्ष भण्डारी
जिल्ला सहकारी संघ, काठमाडौंको २० औं साधारणसभा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
सहकारी पत्रकारिता : हिजो, आज र भोली
सहकारीमा दामोदर अधिकारीको संर्घषः ‘व्यवस्थापनमा अब्बलः नीति, विधि र प्रविधिमा राम्रो जानकार’
शुक्रपथ सहकारीद्वारा माईती नेपाललाई खाध्यान्न सहयोग
नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन शिखर सहकारीको अभियान
Home विचार [Opinion] सहकारीको सिद्धान्तः सदस्य डुबोस्, खाल्डोमा जाओस् भन्ने नै हो त ?
सहकारीको सिद्धान्तः सदस्य डुबोस्, खाल्डोमा जाओस् भन्ने नै हो त ?
सहकारी ऐनले नै सरकारी संस्थाहरुलाई ब्याजदर तोक्ने अधिकार दिएको छ । हामी के कुरामा निश्चित हुनुपर्छ भने ऐनले जुन कुराको व्यवस्था गरेको छ त्यो भनेको सरकारको निर्णय हो । यसका लागि जुन समिति बनेको थियो । सन्दर्भ व्याज तोक्ने ११ जनाको समितिमा ६ जना त सहकारी कै अभियन्ताहरु हुनुहुन्थ्यो । समितिले पनि बैंकको औसत व्याजदर, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरलाई हेरेर यो बनाएको हो ।
काम गर्दा म सबैभन्दा जान्ने छु र अरुले गरेको भएन भन्ने बानी छ । अरुले गरेको भएन भन्ने समस्या छ । म तपाईहरुलाई के आग्रह गर्छु भने यो सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले कार्यान्वयन गरेरै छाड्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन । यो कुरामा प्रष्ट हुनुहोस् । अस्तिमात्रै सहकारी विभागले कारबाही गरेको छ । कारबाही गरौं कि नगरौ भनेर सोधेको थियो । मैले भने तुरुन्तै कारबाही गर्नु । सूचना जारी गरिहाल्नु भन्यौं । सहकारी भनेको हाम्रो सदस्यको कसरी अधिकतम हित गर्ने भनेर खोलेको हो । तपाईलाई त्यो स्वायत्तता छ । त्यो स्वायत्तता सदस्यको हित विपरित काम गर्नको लागि बनेको हैन । २२ प्रतिशत, ३० प्रतिशत, ३६ प्रतिशत ब्याज लिनको लागि बनेको हैन । त्यो छुट तपार्इंलाई छैन ।
सदस्य डुबोस्, खाल्डोमा जाओस् भन्ने नै हो त ? त्यसकारण यो ब्याजदर कसको पक्षमा छ ? यो भनेको सदस्यको पक्षमा छ । सदस्यको हितमा छ सञ्चालकको हितमा हैन । त्यसकारण सहकारी संस्था चलाउँदा हामी ऐन नियम मान्दैनौं भनेका छन् । त्यही ऐनद्वारा जन्म भएको हैन सहकारी ? सहकारी ऐनद्वारा जन्मने । अनि आफैं त्यही ऐन मान्दिन भन्ने ? ब्याजदर मान्दिन, अन्य कुरा मान्दिन भन्न मिल्छ । त्यसो हो भने म सहकारी नै चलाउँदिन भनेर बन्द गर्नु । त्यही ऐनमा बन्द गर्ने व्यवस्था छ हामी बन्द गरिदिन्छौं । चलाउन नसक्ने हो भने बन्द गर्नु । अर्को व्यवसाय रोजे हुन्छ । किन यो नै रोज्नु भएको ? यो त व्यवसाय पनि हैन । सहकारीले अधिकतम सहकारीको सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ । सहकारीले उत्पादनमा जोड दिएर, सानो पुँजी संकलन गरेर यसलाई सम्पन्न बनाउने, आय आर्जनको काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पुँजी परिचालन गर्ने हो । अधिकतम ब्याज लिएका कारण अहिले आएर समस्या भएको हो । अहिले १२ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएका छन् ।
अहिले सहकारीको अभियानता भन्नेहरुका संस्थाहरु, विभिन्न विषयगत संघ, जिल्ला संघ, विषयगत संघ, केन्द्रिय संघ, महासंघमा आबद्व सहकारी संस्थाले फट्याई गरिरहँदा, फट्याई गर्ने अवस्थामा पुँगिरहँदा, ती सहकारी संस्थामा आबद्ध सदस्यको बचत, सेयर पुँजी डुब्ने अवस्थामा पुगिरहँदा किन हामी हेरिरहेका छौं ? त्यो आवाज उठाउनु पर्दैन । अनि आज १६ प्रतिशत ब्याजदर बढी भयो भन्दै आजाव उठाउने ? पुनरावलोक हैन यो पहिला कार्यान्वयन हुन्छ । यसमा कुनै गुन्जायस छैन । यो असाध्यै हतार भयो भन्ने पनि सुनियो । सहकारी ऐन– २०७४ सालमा आएको हो । अहिले २०७६ साल हो । यो २ वर्ष हतारमा हो । ०७४ मा ऐन आयो ।
हामीले यति लामो समय अध्ययन गरेर लागु गरेको हो । हतारमा आएको हैन । यो छलफल गरेर आएको छ । ऐनमा नै लेखिएको छ कि सहकारी महासंघले सम्बन्धित विषयगत संघहरुले मातहतका सहकारीहरुलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी उहाँहरुको हो । यो कार्यान्वयन नभएको खण्डमा बढी लिने कारबाहीको भागिदार हुन्छ । ऐनद्वारा जन्म भएको हो । त्यही ऐनले निर्धारण गरेको काम कार्यान्वयन गर्दिन भन्न मिल्दैन हामी कारबाही गर्छौं । यो कुरामा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् ।
अब सबै स्थानीय तहमा यो सन्देश दिन जरुरी छ । तपाईंको तहमा भएको सहकारीले ऐन कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुखलाई निर्देशन दिने तयारीमा छौं । हामी सबै प्रदेशमा गराउँछौं । सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा चिन्ता छ । तपाईहरु पनि चिन्तिन हुनुपर्छ । सहकारी नाफा उन्मुख संस्था हैन । मुनाफा उन्मुख संस्था खोल्ने हो भने त्यो सहकारीको मूल्य मान्यता आदर्श विपरित हुन जान्छ । त्यसैले यो सहकारीको क्षेत्र छोडेर अन्यत्र गए हुन्छ । उद्योग खोल्नु उत्पात नाफा कमाउनु । सहकारीमा बसेर मुनाफा कमाउने, संस्था धनी बनाउने भन्ने हिसाबले हैन । हिँजो साउले चर्को ब्याज लिन्थे । आज सहकारी चाँही संस्थागत साहू हुने सहकारी ? सहकारी संस्थागत साहू हुन खोजेको छ हैन होला नि ? त्यसैले सहकारी ऐनको परिपालना गरेको हो । तपाईलाई हस्तक्षेप गरेको हैन । ऐनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गरेको हो ।
स्वायत्तताको कुरामा आफूलाई सहज हुँदा स्वायत्तता, असहज भएपछि सरकार के हेरेर बसेको भन्ने ? आफूलाई सहज भएसम्म २२, २४, २६ प्रतिशत पुगेसम्म स्वायत्तता हुने ? यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि लागु हुन्छ । तपाईहरुले ६ प्रतिशतभन्दा फरक नहुनेगरी ब्याजदर लिनु, १६ प्रतिशत भन्दा नबढाउनु । १६ प्रतिशतमा ब्याज लिनदिन हुन्छ भने १० प्रतिशत ब्याज दिनु भन्ने सिद्दान्त अबलम्बन गरेको हो । यो कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयनमा कुनै दुबिधा हुँदैन । दुबिधा हुने गुन्जाय पनि छैन । कानूनमा आधारित भएर गरेको निर्णय मान्दैनौ भन्नेलाई कारबाही हुन्छ । थोरै पुँजी लिएर बसेकालाई बढी भन्दा बढी ब्याज लिएर डुबाउन पाईदैन ।
अहिलेपनि धितोराख्ने चर्को ब्याज लिने, लिलाम गर्ने, आफै सकार्ने अनी सदस्य डुबाउने गरेको रिपोर्ट धेरै आएको छ । हामी अनुगमन गर्छौ । कारबाही हुन्छ । अब स्थानीयतहले नी अनुगमन गर्छ । काठमाडौं बेसर दार्जुलाको सहकारी नियमन पनि हुन्दैन । भोली फेरी स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्यो भनेर नभन्नु होला, गर्छ । अब त्यो दिन आएको छ । आफुले आफ्नो संस्थालाई बढीभन्दा बढी हित हुने गरी काम गर्नु, मेरो आग्रह छ ।
(सहकारी पत्रकार समाजले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गाैतमले दिएको मन्तव्य)
२८ औं बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुन सदस्य संघ/संस्थाहरुलाई नेफ्स्कूनको सुचना
साधारण सभामा प्रतिनिधि पठाउने बारे नेफ्स्कूनको सुचना
राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा अबको अध्यक्ष को ?
विश्वज्योति साकोसको आठौं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
नेफ्स्कूनको निर्वाचन एक वर्षअघि गर्न कसले दियो दवाव ?
यी हुन् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका जन्मदाता !
सदस्यको सेवामा समर्पित शिखर सहकारी
स्वतन्त्र शान्ति सहकारीमा जागिर खुल्यो
पालोक सहकारीमा जागिर खुल्यो
सहकारीमा जागिर खुल्यो
साकोस स्थिरीकरण कोष स्थापना हुँदै, कोषमा सहभागी हुन के गर्ने ?
पुस ३ गते सहकारीको कुनै पनि कार्यक्रम नराख्न महासंघको निर्देशन
जिल्ला सहकारी संघ दार्चुलाको अध्यक्षमा जोशी
Archives Select Month December 2019 (13) November 2019 (47) October 2019 (27) September 2019 (34) August 2019 (35) July 2019 (16) June 2019 (20) May 2019 (17) April 2019 (42) March 2019 (7) February 2019 (8) January 2019 (42) December 2018 (29) November 2018 (12) October 2018 (2) September 2018 (20) August 2018 (12) July 2018 (11) June 2018 (25) May 2018 (17) April 2018 (6) March 2018 (35) February 2018 (18) January 2018 (16) December 2017 (30) November 2017 (13) October 2017 (16) September 2017 (18) August 2017 (19) July 2017 (6) June 2017 (10) May 2017 (9) April 2017 (24) March 2017 (18) February 2017 (7) January 2017 (42) December 2016 (64) November 2016 (30) October 2016 (22) September 2016 (32) August 2016 (33) July 2016 (36) June 2016 (72) May 2016 (24) April 2016 (47) March 2016 (49) February 2016 (47) January 2016 (68) December 2015 (47) November 2015 (27) October 2015 (23) September 2015 (47) August 2015 (49) July 2015 (52) June 2015 (93) May 2015 (77) April 2015 (95) March 2015 (61) February 2015 (73) January 2015 (59) December 2014 (85) November 2014 (101) October 2014 (67) September 2014 (132) August 2014 (148) July 2014 (126) June 2014 (63) May 2014 (77) April 2014 (76) March 2014 (51) February 2014 (41) January 2014 (73) December 2013 (101)